Mividiana vovoka DHEA hanatsarana ny fitomboan'ny vatana sy hihatsara - Metabolisma salama sy fiasan'ny tsimatimanota - fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Vovon-tsakafo DHEA hanatsarana ny fitomboan'ny vatana & hihatsara - Metabolisma salama & fiasan'ny tsimatimanota
$54.99 Regular vidiny $81.99
Color 20g 10g 100g 50g
DHEA Powder hanatsarana ny fitomboan'ny vatana & hivoatra - Metabolism salama & hery fiasa - 20g tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
NET WT: 5g-100 g
Akora ilaina: Dehydroepiandrolone
Quantity: kitapo 1
Laharana modely: B151
Fampidirana lehibe an'ny DHEA:
Dehydroepiandrosteron (DHEA) dia steroid maro karazana izay voarohirohy amin'ny vokatra biolojika marobe amin'ny olombelona sy biby mampinono hafa. Miaraka amin'ny ester sulfate (DHEAS), izy no steroid betsaka indrindra amin'ny olombelona.
Ny DHEA dia novokarin'ny fihary adrenal fa koa synthesized de novo ao amin'ny ati-doha. Izy io dia miasa amin'ny mpandray androgen ary na amin'ny alalàn'ny metabolita, izay misy androstenediol sy androstenedione, izay mety hiova fiovana bebe kokoa mba hamokarana testosterone androgen sy estrogens estrone ary estradiol.
Ny fandinihana dia naneho fa ny DHEA dia ilaina amin'ny marary izay manana lupus erythematosus. Ny fampiharana ny porofo dia noresahan'ny US Food and Drug Administration tamin'ny 2001 ary azo jerena amin'ny Internet.
Ity famerenana ity dia mampiseho ihany koa fa ny kolesterola sy ny lipida serum hafa dia mihena amin'ny alàlan'ny fampiasana DHEA (indrindra ny fihenan'ny HDLC sy triglycerides dia azo antenaina amin'ny vehivavy, p110).
DHEA Main Function:
Ny DHEA dia manana ny fiasan'ny fahanterana, mihazona ny tanjaky ny tanora.
Ny DHEA dia nanatsara ny fahasalamana ara-batana, manatsara ny toe-po sy ny torimaso, manatsara ny vokatry ny fahatsiarovana.
DHEA dia afaka manatsara ny fanaovana firaisana ara-nofo, mampitombo ny libido.
DHEA dia afaka mifehy ny hery fiarovan'ny vatana, manatsara ny hery fiarovan'ny vatana.
DHEA dia manana andraikitra faharoa amin'ny fitsaboana aretina.
Manatsara ny toe-po sy ny torimaso ny DHEA
Miorina amin'ny fanavaozana 17
Haingana dia haingana ny fandefasana tany Canada. Ny zavatra dia mety levona amin'ny etanol na alikaola isopropyl (ho an'ny transdermal), na amin'ny menaka manafana miaraka na tsy misy vitamina E. Aza maka be loatra sao mivadika ho estrogen. Mety ny fampiasana paypal ka faly aho fa manolotra an'ity ny aliexpress.
Vokatra sy serivisy tena tsara